कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: नखाएको विष–थुनुवाको डायरी– ९
नखाएको विष–थुनुवाको डायरी– ९
२०६७/०७/१५ (१ नोवेम्बर २०१०) सोमवार—२६औँ दिन
“नुहाउनको लागि पानी खुल्यो” भनेर माइकबाट सुचना जारी ग¥यो । यहाँ नुहाउनको लागि आपूmले चाहेको बेलामा पानी पाउँदैन । यस्तै हप्ता दश दिनमा एकचोटि पाइन्छ । बाल्टिन लिएर पानी थाप्न गएँ । अरूहरू दुईटा बाल्टिन लिएर आएका छन् । आफ्नो त एउटा मात्र बाल्टिन छ । पानी थापेर आएँ । बाहिर बसेर नुहाउन लागेँ ।
मेरो श्रीमती कृष्णा, मेरो स्वास्नी मात्र होइन । मेरो जीवनमा उनको अनेकौँ भूमिका छ । आमाले जस्तै मलाई भोक लाग्यो कि भनेर चिन्ता लिइ हरदम खुवाउन तयार हुन्थिन् । बच्चाले आमालाई तेल मालिश गरि दिए जस्तै म कामबाट थाकेर आउँदा तेल मालिश गरिदिन्थिन् । उनी पढेलेखेकी नभए पनि उनको स्मरणशक्ति गजवको थियो । साथीसँग सल्लाह गरेझै हामी सल्लाह गथ्र्यौँ । हामी एक अर्कामा पूर्ण विश्वास गथ्र्यौँ । कुनै बेला कुनै किसिमको गल्ती हुन गएमा हामी एक अर्कासँग माफी माग्थ्यौँ । यसरी चखेवा–चखेवी जस्तै बसिरहेका हामीलाई ती अधर्मी बच्चाहरूले गर्दा आज छुट्टिएर बस्नु परेको छ ।
नुहाएर एकछिन घाममा बसिरहेको बेला माइकबाट मेरो नाम बोलायो । ढोकामा गएको त सालिकराम आएको रहेछ । उसले पनि यहाँ भित्र परेकोमा दुखेसो पोख्यो । म निरपराध छु भन्नेमा ऊ पनि विश्वस्त छ । आगामी कार्तिक ३० गते पाँगा धुसिको गौतम बुद्ध विहारमा कठिनोत्सव हुँदैछ । त्यस विहारको सचालक समितिको सचिव म अहिले थुनुवामा बसिरहनु परेको छ । १७ नं पुनरावेदनबाट छिटो छुटोस भन्ने शुभकामना दिएर गयो ।
२०६७/०७/१६ (२ नोवेम्बर २०१०) मंगलवार—२७औँ दिन
१०ः४५ बजे सेन्ट्रलमा जानको लागि ढोका खुल्यो । लाइनमा बसेर गएँ । पर्खाल र घरको विचमा सात फुट जतिको बाटो रहेछ । त्यहाँबाट भित्र लगियो । वास्केटवल कोर्टमा कार्यक्रमस्थल बनाईएको रहेछ । कार्यक्रम सुरु भएको थिएन । त्यसैले यताउता घुम्न थालेँ । घरहरू हेर्न थालेँ । दक्षिणतिर एउटा नयाँ दुईतल्ले घर छ । अरू चारैतिर पुराना दुई तल्ले घरहरू रहेछन् । चिया खाने होटलहरू चारवटा रहेछन् । मःमः पसल, छ्वय्ला, चाउमिन, थुक्पा, माछादेखि बंगुरसम्मको मासु पाइदो रहेछ । चुरोट पसल तीन वटा रहेछ । चिया पसलमा बसेर चुरोट पिउन पनि हुँदो रहेछ । कपडा पसल पनि रहेछ ।
“हामी भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनमा गएर आएको मैले सबै कुरो बुझीसकेँ । भोलि बच्चाहरू भेट्न जानेछौँ । तिमी निर्दोष छौं भन्नेमा मलाई विश्वास छ । उनीहरूले यस्तो आरोप किन लगाएको होला ?’ डा.डंगोलले सोध्नुभयो ।
“अब ५,१० लाख दिएर भए पनि मिलाउनु प¥यो । तिमी छिट्टो बाहिर निस्कनु प¥यो ।” डा.डंगोलले भन्नुभयो ।
“हुँदैन, पैसा दिएर, मिलाएर म बाहिर आउन चाहन्न । त्यो संस्थालाई पैसा दिनु भनेको फेरि मजस्तै अर्को बूढालाई फसाउन प्रोत्साहन दिनुजस्तो हुनेछ । मैले गर्दै नगरेको अपराधमा कसरी सजायँ हुन्छ ? यदि सजायँ नै भए पनि भु्क्तान गर्न म तयार छु ।’
यतिकैमा समय सकियो भनेर हामीलाई कुरा गर्न दिएन । तीनैजनासँग हात मिलाएर म भित्र गएँ । भद्रवन्दी गृहमा जस्तो धेरैवेर कुरा गर्न नपाइने रहेछ । सेन्ट्रल जेलभित्र यताउता घुम्न लागेँ । भद्रबन्दीजस्तो सफा सुग्घर रहेनछ । जहाँ पायो त्यहाँ बसेर चुरोट पिउन पाइने, नालीमा पानी जमेको छ । मिनिरल वाटर बोटल पनि नालीमा फालिराखेको छ । जताततै कागजको टुक्राहरू देखिन्छ । पान खाएर पिच्च पिच्च थुकिराखेको छ । एक प्लेट चिउरा र छ्वय्ला खाएँ । रु.५० लियो । मलाई त भद्रमा कहिले फर्कुंला जस्तो भयो । सेन्ट्रल जेल र भद्रबन्दी गृह नरक र स्वर्ग जस्तै फरक रहेछ । २ः४५ बजे हामी भद्रवन्दी गृहमा फर्किर्यौं ।
२०६७/०७/१७ (३ नोवेम्बर २०१०) बुधवार—२८औँ दिन
ओहो † म यस भद्रबन्दी गृहमा आएको अठाइस दिन भइसकेको रहेछ । कति छिटो समय बितेछ । मलाई त एक हप्ता पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ । परिस्थितिसँग सामना गर्न सकेँ भने मानिस जहाँ पनि बस्न सक्दोरहेछ । जीवन एक चुनौती हो । त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्छ । आज मैले कहिल्यै नसोचेको ठाउँमा आएर बस्नु परेको छ । परिस्थितिले मलाई यहाँ ल्याइ पु¥यायो । मैले चाहेर यहाँ आएको होइन । त्यसैले मैले यहाँ बस्दिन भनेर सुख पाउँदिन । मानिस परिस्थितिको दास हो । मैले चाहे पनि नचाहे पनि मुद्दा नछिनेसम्म यहाँ बस्नै पर्छ । यो मेरो बाध्यता हो । यो कुरालाई मैले बुझेको छु । त्यसैले यहाँको परिस्थितिसँग मैले घुलमिल हुन सक्नुपर्छ । यहाँको परिस्थितिसँग घुलमिल भइसकेको छु । त्यसैले त मैले अठाइस दिन बितेको चालै पाइनँ । यो मेरो सफलता हो ।
मानिस हत्यारा किन बन्छ ? यदि त्यतिबेला मलाई फसाउने ती बच्चाहरूलाई उनीहरूले भेट्टाएको भए बाँकी राख्थ्यो होला त ? अवश्य राख्दैन थियो होला । उनीहरू भन्दै थिए —हाम्रा बाबु जस्तो सरलाई यस्तो दुःख दिने उनीहरूलाई भेटेँ भने गर्न जानेछु ।”
१२ः४५ बजे अचानक माइकबाट मेरो नाम बोलायो । पक्कै छोरा आएको होला भनेर लुगाको पोका लिएर गएँ । ढोकाबाट बाहिर हेरेको त मेरी प्यारी जीवन संगीनी कृष्णा र बुहारी सरू आएका रहेछन् । मेरो मन हर्षले प्रफुल्लित भयो । कृष्णा अस्ति जस्तो दुब्लाएकी छैनन् । अहिले मुख पनि उज्यालो छ । कुराकानीको क्रममा थाहा पाएँ । डा.डंगोल हिजो मेरो घरमा गएको रहेछ । मैले पैसा खुवाएर मिलाएर बाहिर निस्कन्न भनेको कुरो डा.ले घरमा गएर भनेछ । किन त्यसो भनेको भनेर श्रीमतीले सोधिन् । यहाँ कति दिन बस्ने विचार छ ?
“मैले गर्दै नगरेको अपराधमा सफाइ पाउनु पर्छ । मिलाएर बाहिर आएँ भने मैले अपराध गरेकोले त संस्थालाई पैसा ख्वाएर बाहिर आएको भन्छ । मेरो इज्जत जान्छ ।” मैले भनेँ ।
हामी कुरा गरिरहेको बेला छोरा आयो । कार्तिक २५ गते पुनरावेदनमा मेरो पेशी राखेको कुरा छोराले बतायो । हामी चारै जना बसेर निकैबेर कुराकानी ग¥यौँ । निकैबेर कुराकानी गरेपछि घरमा नाती निशान्त एक्लै छ भनेर गए ।
Posted by kirtipur.com.np at 7:50 PM